US: Askarigii dilay ninka madow ee George Floyd oo dacwad cusub lagu soo oogay - Calanka.com
Dacwado cusub ayaa lagu dhawaaqay in lagusoo oogay dhamaan askartii booliiska shaqada laga ceyriyay ee ku sugnaa halkii uu ku geeriyooday ninka madow ee magaalada Minneapolis.
Dacwadda ka dhanka ah Derek Chauvin ayaa sare loogu qaaday waxaana la gaarsiiyay dil darajada labaad ah, sida ay muujinayaan dukumiintiyada maxkamadda.
Saddexda sarkaal ee kale, oo aan horey wax kiis ah aan lagu soo oogin, ayaa hadda wajahay dacwado ku saabsan kaalmaynta dilka.
Dhimashadii Floyd waxay dhalisay mudaaharaadyo waaweyn oo ka dhan ah Mareykanka oo looga soo horjeedo cunsuriyadda iyo dilka booliisku u gaysanayaan dadka Madow ee Mareykanka ku nool.
Sideedii maalmood ee la soo dhaafay, banaanbaxyada badankood waxay ahaayeen kuwa nabad ah, laakiin qaarkood waxay noqdeen kuwo rabshado ay ka dhashaan iyadoo bandow lagu soo rogay magaalooyin badan.
Dibedbaxyada ayaa maraykanka ka bilawday kadib markii fidiyoow uu soo baxay muujinaya Mr Floyd, oo 46 sano jir, la xiray 25kii bishi aynu soo dhafnay ee magaalada Minneapolis iyadoo askari cadaan ahna uu qoorta jilibka ka saaray halka Floyd uu ninka asrkariga uu u sheegay in uusan nefsan karin.
Xilli uu ku dhawaaqay eedeymaha cusub, Xeer Ilaaliyaha Guud ee Gobolka Minnesota Keith Ellison wuxuu sheegay inay danta cadaaladda ka shaqeeyaan.
Saddexda boolis oo kale oo shaqada laga fariisiyay ayaa kala ah Thomas lane, J Alexander Kueng iyo Tou Thao. Saddexdooda ayaa hadda ku eedeysan inay kalmeyeen dil daraja labaad ah.
Senatorka gobolka Minnesota ayaa barta twitterka ku qortay in dacwaddahan la soo oogay ay yihiin “tallaabo kale oo muhiim ah oo loo qaaday dhanka caddaaladda”.
Qareenka qoyska Floyd Benjamin Crump wuxuu warbixin ku yiri: “Tani waa tilaabo muhiim ah oo horay loogu qaaday dhanka cadaalada waxaanan ku qanacsanahay in talaabadan muhiimka ah la qaaday ka hor inta aan la aasin George Floyd.”
Balse xilli dambe ayuu talefishanka CNN u sheegay in qoyska aamminsayihiin in Derek Chauvin ay mudantahay in lagu soo oogo dilka darajada koowad waxaa uuna intaasi ku dray in loo sheegay in baaritaanada ay sii socdaan saas awgedna ay dacwadda gadaal iska bedeli karto.
Geeridii George Floyd ayaa waxaa dhashay dibadbaxyo guud ahaan dalka Mareykanka, iyada oo ay dibadbaxayaasha ay ku baaqayaan in la soo afjaro dhibaatooyiinka ay booliika geystaan.
Mr Floyd ayaa ahaa nin madow ah oo aan hubeysnayn islamarkana askari ka tirsan booliiska uu luqunta in ka badan 8 daqiiqo jilibka kaga hayay isaga oo ku qaaylinayay”ma neefsan karo”.
Isniintii , ayaa askari lagu magacaabo Derek Chauvin uu jilibka dhulka kula nabay isaga oo lagu eedeeynayo in uu goob dukaan ah uu wax uga iibsanayay 20 doolar oo been abuur ah.